Wararka Maanta: Khamiis, Oct 15, 2020-Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle "Jadwalkii doorasho ee guddiga farsamadda waa mid sax ah waana lagu shaqeynayaa"
Cali Cabdullahi Guudlaawe oo mudooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa markii uu soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere waxaa loo galbiyay hoyga uu ka dagan yahay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle halkaasoo uu kula hadlay Saxaafadda.
Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle ayaa sheegay in la joogo waqtigii la dhisi lahaa Hirshabelle cusub uuna soo dhaweynayo Jadwalkii hanaanka doorasho ee Hirshabelle ay soo bandhigeen guddiga farsamadda iyo soo xulista Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle.
"Jadwalkii doorasho ee guddiga farsamadda waa mid sax ah waana lagu shaqeynayaa waana ku amaanayaa sida masuuliyada leh ay usoo diyaariyeen hanaanka doorashada Hirshabelle" ayuu yiri Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe
Waxuu sido kale Madaxweyne ku xigeenka amaan iyo bogaadin uu u jeediyay wassaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabelle oo uu sheegay iney si wanaagsan u diyaarin hayso dhismaha Hirshabelle cusub.
Safarka maanta ee Cali Cabdullahi Cuseen Guudlaawe waxaa qeyb ka ahaa guddoomiyeyaashi hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed iyo C/fataax Xasan Afrax kuwaas oo iyagana ka hadlay madashii lagu soo dhaweynayay madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegeen in la joogo waqtigii la dhisi lahaa Hirshabelle cusub.
Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in Hirshabelle markii horeba la dhisay iyadoo laga daba qeylinaayo hadana la dhisi doono oo aan cidna loo joojineyn.
Walaac badan ayaa laga muujinaya qaab dhismeedka cusub ee Hirshabelle waxaana muuqanaya qilaaf cusub oo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa ee Hirshabelle madama madaxweynaha Hirshabelle uu horay u diiday Jadwalkii doorasho ee guddiga farsamadda madaxweyne ku xigeenkana uu maanta shaaciyay in Jadwalkaasi uu yahay mid sax ah laguna shaqeyn doono.